केही व्यवसायी नेता र गुटबन्दीको कारणले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समस्या आयो – newslinesnepal
प्रकाशित मिति : १० असार २०७६, मंगलवार १०:५०
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
अध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष हंशराज वाग्ले अहिले नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष छन् । समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र व्यवसायीको हित र उन्नयनमा सक्रिय पाथिभरा ओभरसिजका सञ्चालक वाग्ले हक्की व्यवसायीका रुपमा पनि परिचित छन् । नेपाली काँग्रेस निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा रहेको फोरममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न बहुमत सदस्यहरु रहेको दाबी गरिन्छ । संघले आगामी आषाढ २७ गते साधारण सभा र निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ । यो अवस्थामा फोरमको उम्मेदवार नै नयाँ नेतृत्वको स्वतः दाबेदार मानिने भएकाले फोरममा नेतृत्व चयनको निकै कसरत चलिरहेको छ । यसै क्रममा फोरमले अध्यक्षका लागि व्यवसायी कमल तामाङको नाम चयन गरेको छ भने अन्य पदमा उम्मेदवार चयन हुन बाँकी नै छ । वाग्ले अहिले नेतृत्व चयनको रस्साकस्सीमा निकै व्यस्त छन् । यसै सन्दर्भमा संघको निर्वाचन, फोरमको सहभागिता र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विविध पक्षहरुमा जनसवाल दैनिकका लागि नमराज सापकोटाले अध्यक्ष वाग्लेसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ फोरम अध्यक्ष वाग्लेसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप :
तपाईँ नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । साथै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । के छ अहिलेको वैदेशिक व्यवसायीहरूको अवस्था ?
समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ, अर्थात् शून्य अवस्थामा नै पुगेको छ । विगत एक वर्ष अघिदेखि व्यवसायीहरूको नेतृत्वकर्ताहरुले नै व्यक्तिगत स्वार्थमा गलत सम्झौताहरू गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सीमित मानिसहरूले मात्र एकाधिकार जमाउने गरी विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटका प्रोपोगान्डाहरु रचेर वैदेशिक रोगजारलाई आइसीयुमा पुर्याउने काम गरेका छन् । व्यवसायीहरू मात्र हैन कामदारहरू पनि यस अवस्थाबाट पीडित छन् । यस विषयको निराकरणको लागि विभिन्न प्रकारका प्रभावकारी योजनाहरू सहित काम नगरिएको कारणले यो अवस्था आएको हो । मलेसिया विगत १४ महिना अघिदेखि बन्द छ, यो खोल्ने पहल न त व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट भएको छ, न त सरकारी तवरबाटै भएको छ । यसको प्रभाव तत्काल नदेखिएता पनि दीर्घकालीन रूपमा एक दुई वर्ष पछाडि नराम्रो गरी देखिने छ ।
अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको व्यवसाय गर्ने दिन सकिएकै हो त ?
संसारमा कुनै पनि मुलुकमा वैदेशिक रोजगार कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन । यो निरन्तर चलिरहने विश्वव्यापी प्रक्रिया हो । तर यस्तो चालाले भने हाम्रो देशमा बन्द हुने अवस्था आएको हो कि जस्तो भान हुनु अस्वाभाविक होइन । अमेरिका बेलायत जस्ता विकसित मुलुकहरूबाट पनि नेपालजस्तो देशमा कामकालागि मानिसहरू आइरहेका छन् भने नेपालबाट अन्य मुलुकमा जाने क्रम बन्द हुन्छ भन्नु व्यवहारिक हुँदैन । गलत मनसायसहित व्यवसायमा एकाधिकार जमाउने केही व्यवसायी नेता र गुटबन्दीको कारणले यस्तो समस्या आएको हो तर यसलाई समाप्ति भन्न मिल्दैन । देशमा गृहयुद्ध चलेको अवस्थामा पनि राष्ट्रनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरी देशलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु भएजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेको यावत समस्याहरूलाई मेरो नेतृत्वमा समाधान गरी पुनः स्थापित गराउने छु । अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेका ८० प्रतिशत व्यवसायीहरू पीडामा छन्, व्यवसायीहरूको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउने जिम्मेवारी मेरो हुन आएको छ ।
कसको कमजोरीका कारण यो व्यवसाय यस्तो दयनीय अवस्थामा आइपुगेको हो त ?
सबैभन्दा पहिलो कमजोरी भनेकै हामी व्यवसायीहरूकै हो । समस्या पर्दा पनि एकत्रित भई समस्याको विरुद्धमा नलडेर गुटबन्दी गरी समस्यालाई झन् विकराल बनाउने कार्यले थप समस्या भएको हो । त्यसै गरी व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको लाचारीपन र सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले यो अवस्था आएको हो । केही मानिसहरूले निहित स्वार्थ बोकेको कारणले र पार्टीगत स्वार्थको कारणले यस्तो समस्या सृजना भएको हो । मलाई व्यवसायीहरूको यो अवस्था देखेर कहिलेकाहीँ डाँको छोडेर रुन मन लाग्छ । तर पनि केही गर्ने प्रयास भने गरिनैरहेको छु । वर्तमान मन्त्री र सीमित स्वार्थ भएका व्यवसायीहरूका कारणले यो व्यवसायको यस्तो दुःखान्त अवस्था आएको हो । अब यसलाई छिटै हामीले सुधार गर्नुपर्दछ ।
यहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नेतृत्वमा लामो समयदेखि रहनुभएको छ । यहाँलाई के लाग्छ, यो व्यवसायलाई अझै पनि बचाउन सकिन्छ ?
मेरो अनुभवले के भन्छ भने सबै समस्याहरूका समाधान हुन्छन् । र, म विश्वस्त पनि छु कि मैले यो व्यवसाय र व्यवसायीहरूलाई पुरानैरुपमा स्थापित गर्न सक्छु । यसको लागि धेरै ठुलो कामहरू पनि गर्नुपर्दैन बरु निस्वार्थ भावले काम गरे मात्र पुग्छ । नीतिनिर्माणको तहमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयहरूलाई मिहिनरुपमा अध्ययन गरी सही सुझावहरू पेस गर्न सकियो भने यस व्यवसायमा यतिका धेरै समस्याहरू सृजना हुने छैनन् । र यो काम मैले गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ । सङ्घको आगामी निर्वाचनमा फोरमको तर्फबाट पठाएका उम्मेद्वारहरु निर्वाचिचत गराउनु भयो भने म १५ दिन भित्र यस व्यवसायलाई पुर्न जीवन दिन सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ । साथै, धरौटीको विषय र मलेसिया रोजगारीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्ने मेरो प्रतिबद्धता रहने छ ।
यहाँ प्राय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको निर्वाचन आएपछि विवादमा तानिनुहुन्छ । तपाईँले व्यवसायीलाई बुझाउन नसक्नु भएको हो कि तपाइलाई अरूले बुझ्न नसकेका हुन ?
बडो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । म बाँचुन्जेल र यस व्यवसायमा रहुन्जेल कसैको चाकडी नगरी विशुद्ध व्यवायीहरुको हकहितका निमित्त लडिनैरहने छु । मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूले लगाएका आरोपका पछाडि म लाग्दिन । अहिलेपनि जो समस्यामा परेका व्यवासयीहरु छन् उहाँहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ र म उहाँहरूको साथमा छु । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मेरो लामो अनुभव छ । मैले सचिव, महासचिव, प्रथम उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी नेपाल वैदेशिक व्यवसायी सङ्घमा निर्वाह गरिसकेको छु । त्यसर्थ, मैले समय सान्दर्भिक व्यवसायीहरूका समस्याहरूमा गरेका वास्तविक कामहरूलाई नै निहित स्वार्थ भएका व्यवसायी नेताहरूले विरोध गर्दछन् । तर, कसैले सामान्य विरोध गरेकै भरमा म विचलित हुँदिन । म प्रचारवाजीको पछाडि लाग्दिन । व्यवसायिक हकहितको लागि निरन्तर लडिरहने छु ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले असार २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यसमा मेनपावर व्यवसायीको नैराश्यता किन ? के निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ त ?
नीति र विधानलाई मान्य हो भने र व्यवसायी नेताहरू इमानदार हुने हो भने यो निर्वाचन कुनै पनि हालतमा तोकिएको समयमै हुनुपर्दछ । तर, वैदेशिक रोजगारको इतिहासमा रोहनजी एकदमै कुटिल नेता हुनुहुन्छ । उहाँ व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि विभिन्न बहानामा आफ्नो कार्यकाल लम्बाउने चलखेलमा मात्र रहनुहुन्छ । हामीले थाहा पाएसम्म नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू एक महिना अघिदेखि नै छुट्टी बस्ने प्रचलन थियो तर रोहनजीले त्यसै प्रकारको कूटनीति अपनाई आफू बिदा लिई समस्याबाट भागिरहनु भएको छ । यो राम्रो नियत देखिँदैन । मेरो जिकिर के छ भने यो निर्वाचन जुन सुकै हालतमा पनि तोकिएकै समयमा हुनुपर्दछ । नभएमा जुनसुकै कदम चाल्न पनि फोरम तयार छ । फोरमको टिमलाई निर्वाचित गराउनु भयो भने श्रावण महिना भित्रै व्यवसायीहरूलाई राहतको सास फेर्ने वातावरण सृजना गराउने छु ।
यहाँले कमल तामाङलाई एकतर्फीरुपमा लोकतान्त्रिक फोरमको तर्फबाट सङ्घको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभयो । यो विवादस्पद भइरहेको छ । कसरी मिलाउनु हुन्छ त ?
यहाँ एकतर्फी भन्ने शब्दावलीसँग म सहमत छैन । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक व्यवसायी फोरमको विधान अनुसार कार्यसमितिको बैठकको ५१ प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थिति भई हस्ताक्षर भएपछि बैठकको कोरम पुगेको मानिन्छ । र, त्यही विधानको अर्को बुँदामा उल्लिखित छ कि–उपस्थित बहुमतको संख्याले गरेको निर्णय पूर्ण मान्य हुने छ । यिनै दुई बुँदालाई आधार मानी मैले लोकतान्त्रिक फोरमबाट आगामी निर्वाचनमा कमल तामाङलाई अध्यक्षको उम्मेदवारी पठाउने निर्णय गरेको हुँ । विधानत यो सही नै छ । यसलाई विवादास्पद बनाउनु भनेको– धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने प्रवृत्ति हो । फोरमकै केही साथीहरूले हामीभित्रैका साथीहरूलाई प्रयोग गरी बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यो दिवास्वप्न नदेख्न ती खुरापाती साथीहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु र यो व्यवसाय बचाउनको लागी हातमा हात मिलाएर अघि बढ्न अनुरोधसमेत गर्दछु । अझै पनि यो व्यवसायलाई पहिलेकै स्थानमा पुराउन सकिन्छ । मलाई साथ दिनुहोस, सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई असार १० गतेभित्र सङ्घको निर्वाचनको लागि आफ्नो प्रतिनिधि पठाइ निर्वाचनमा भाग लिन हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु ।
अध्यक्षको उम्मेदवार तोकिनुले तपाईँ पछिल्लो समय फेरी विवादमा तानिनुभएको छ । अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ त ?
साथै, सीमित व्यक्तिहरूले भनेका भरमा म त्यी व्यक्तिहरूको भनाइको पछाडि लाग्दिन । यस विषयमा म विधि र विधानलाई पालना गरेर अघि बढ्ने छु । विवाद हैन मैले विधि भित्रै रहेर काम गरेको छु । कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छुईन । विधान विपरीत कुनै काम गरेको रहेछु भने सजायको भागीदार हुन म तयार नै छु ।
फेरी पनि अघिल्लो निर्वाचन जस्तै फोरमको लज्जास्पद हार त हुँदैन नि ?
सकारात्मक सोच नै विजयको पूर्व तयारी हो । यस्तो नकारात्मक कुरा म सोच्नै सक्दिन । नकारात्मक कुरा नसोचौं । समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू लोकतान्त्रिक फोरमसँग आबद्ध व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू कुनै न कुनै पक्षबाट नेपाली काँग्रेससँग प्रत्यक्ष गासिनु भएको छ । कतिपय व्यवसायीहरू त नेपाली काँग्रेसको जिम्मेवार तह र तप्कामा समेत हुनुहुन्छ । त्यसकारणले पनि म विश्वस्त छु कि आगामी निर्वाचनमा पक्कै पनि हाम्रो सहज जित हुने छ । मेरो नेतृत्वमा फोरमको तर्फबाट पठाइएका सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरुलाई निर्वाचित गराउने छु । यदि सकिन भने नैतिकताको आधारमा फोरममा बस्ने मेरो अधिकार हुने छैन ।
अन्तमा, सङ्घको नेतृत्वमा फोरमको उम्मेद्वारहरु निर्वाचित भए भने तत्काल गर्न सकिने कामहरू बुँदागतरुपमा बताईदिनुस न ?
म ढुक्क छु हाम्रो नेतृत्वले निर्वाचन जित्ने छ । त्यसपश्चात तपसिलका कामहरू हामी गर्नेछौं । निर्वाचित भएको केही दिनभित्रै धरौटी वृद्धिको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जाने, सबै व्यवसायीलाई सहजरुपमा धरौटी राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने, बैङ्कहरूबाट बिना धितो बैङ्क ग्यारेन्टी दिने व्यवस्थाको लागि उच्चतम पहल गर्ने, मलेसियामा रहेको समस्यालाई १५ दिन भित्र निचोडमा पुर्याउने, व्यवसायीहरूलाई पहिलेकै अवस्थामा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्ने, सङ्घको नेतृत्वले नितान्त व्यवसायीका समस्याहरूमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्ने, विभिन्न बहानामा शाखा कार्यालयलाई बन्द गर्ने र व्यवसायिक कम्पनीहरूमा छापा मार्ने प्रवित्तिलाई बन्द गर्ने आदिजस्ता महत्पूर्ण कामहरू गर्ने छु । धन्यवाद ।